कोरोनाका बिरामीमा कालो ढुसीको संक्रमण बढ्दो, काठमाडौंमा पनि भेटिए संक्रमित ! - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ १८, मंगलवार १०:०३
म्युकोरमाइकोसिस (कालो ढुसी) को संक्रमण देशका अन्य शहरहरुमा पनि देखिन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेल वीरगञ्जबाट देखिन थालेको यो संक्रमण बाँके, काठमाडौं लगायतका शहरमा देखिएको पुष्टि गर्छन् ।
नेपालमा पनि गरेर कोभिड–१९ निको भएका बिरामीहरुमा ब्लाक फङ्गलको संक्रमण देखा परेको छ । ‘कोभिड संक्रमण हुने दर अहिले बढ्दो छ । संक्रमणको बेला धेरै जनाले स्टेरोइड लगायत एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गरेका छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। पौडेलले भने, ‘कोभिड सञ्चो भएका व्यक्तिहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले ब्लाक फङ्गसको संक्रमण बढ्न गएको हो ।’ डा. पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय हप्तामा कालो ढुसीका दुईरतीन वटा केस देखा परेका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने आगामी दिनमा कालो ढुसीको संक्रमण बढ्दै जाने सम्भावना प्रवल रहेको उनले बताए ।
संक्रमितको स्वाबको माउन्ट गरेर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट गरेर यो रोगको पहिचान गर्न सकिने उनले बताए । यसै गरी कल्चर टेस्ट तथा बायोप्सी परीक्षणमार्फत पनि यो रोगको पहिचान गर्न सकिने डा.पौडेलको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय कालो ढुसीको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकार औषधिको जोहो गर्नतर्फ लागेको छ । एन्टिफंगस औषधि ल्याउनका लागि डब्लूएचओसँग समन्वय भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले बताए । ‘डब्लूएचओको सिस्टमबाट औषधि ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जुन ३ वा ५ तारिखभित्र यो औषधि नेपाल आइसक्छ ।’ नियमित हवाई उडान नभएका कारण औषधि आउन ढिलाइ भएको उनले बताए ।
‘कालो ढुसी के हो ? यसका लक्षणहरु के–के हुन् ?, कस्ता बिरामीहरुमा यसको संक्रमण देखिन्छ ? यसको पहिचान कसरी गर्ने ?, सचेतना अपनाउन के–के गर्न सकिन्छ ?, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?, उपचार विधिहरु के–के हुन् रु प्रयोग गरिने औषधिहरु के–के हुन् रु’ भन्नेबारे हेल्थ वर्करहरुलाई सुझाव दिनका लागि एडभाइजरी जारी गरिएको डा.न्यौपाने बताउँछन् । अनलाइनखबरबाट